မွေးမေလေ့ နဲ့ နိုင်ငံရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » မွေးမေလေ့ နဲ့ နိုင်ငံရေး	17
မွေးမေလေ့ နဲ့ နိုင်ငံရေး
Posted by ဇီဇီ on Sep 24, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 17 comments
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလ သို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်ကေဇီ တစ်ယောက် အင်မတန် တက်ကြွနေသည်။
ဖွဘုတ် ၄ ခု အနက် ၂ ခုပဲ အက်တီဘိတ်လုပ်ခါ ဟိုကူးဒီကူး ကူးရသည်။ ပျော်ရွှင်သည်။
ရွာ အကောင့်တွင် ရှိသော ပိတ်သတ်ကတော့ သိသာသည်။
ဒေါ်ကေဇီ တက်ကြွသောကြက်ဖ အရွယ်ရောက်မှ တွေ့ဖူးတာ ဖြစ်သောကြောင့် ဒေါ်ကေဇီ တက်ကြွနေခြင်းတွင် အံ့ဩခြင်း အလျှင်း မဖြစ်ချေ။
စိတ်တူသူတွေ ထောက်ခံပြီး အမြင်ကပ်သူများ ရှောင်ကြကုန်၏။ .
ရှိတာက ဟိုဘက် အကောင့်။
မိသားစု၊ ရှိသမျှ အမျိုးတွေနှင့် ကျောင်းတုန်းက ဆရာ ဆရာမတွေ တစ်လှေကြီးမို့…..
အရင် က လှုပ်စိ ဒီဇိုင်း အတိုင်း အလှ ဓာတ်သေလေး တင်လိုက်
အဝစား ပုံလေး တင်လိုက်နဲ့ နေလာခဲ့ရာ ဤ လှုပ်စိမ က တက်ကြွတဲ့ ကြက်ဖ အဖြစ် ပြောင်းလဲနေမှန်းမသိ မျက်ခြေပြတ်ကုန်ကြ၏။
ဒေါ်ကေဇီ ရဲ့ ၈ နှစ်တာ ကာလ အပြောင်းအလဲကို လိုက်မမှီတော့ချေ။
မဲဆွယ်ကာလ ရောက်သောအခါ အလံ ပြောင်းတင်၏။ ပါတီကို သာ မဲပေးပါ ဟုသော လိုဂိုနှင့် ပလိုဖိုင်းပစ်ချာချိန်း၏။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် အသားကျကုန်ကြသော ဆွေမျိုး အစုံ မျက်ဆန်ပြူးကုန်သည်။ အကြောင်းသိ သူငယ်ချင်း တစ်ချို့သာ ဝင်ရောက် အာရွှီးနိုင်ကြ၍ ကျန်သူများက ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြသော
အဖြစ်ရောက်သည်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ တစ်စတေးတပ် ဒီမိုကရေစီ ဘယ်ရွေ့မလဲ ထုံး နှလုံးမူကာ တင်သမျှ စတေးတပ်တွေကို
ဘုရား တ ကာ ဖတ်ကြကုန်၏။
ပြီးခဲ့သော သောကြာက အိမ်ကို ဖုန်းမဆက်တာ ကြာပြီမို့ရော……
အခွေဖြန့်ဖို့ ကိစ္စ ခိုင်းချင်တာရောမို့ ဖခင်ကို ဖုန်းဆက်ရာ မွေးမေလေ့ လာကိုင်တာနှင့် တိုး၏။
ကေဇီ – မာမီလားဟင်။ သာမီးရယ်ပါ။
မွေးမေလေ့ – ဟယ်။ အမေ ချွိလားး .
ကေဇီ – ငင့်။ ဘာဒွေဒုန်းးး? .
မွေးမေလေ့ – အမေ စု ထိ က ဝေးလို့ အမေချွိ ကို ဝန်းရံမလို့လေ။ (စပြီ။ ဒါသက်သက်ရွဲ့တာ။) .
ကေဇီ – အာ ရပါတယ်။ မဝန်းရံပါနဲ့။ မဲစာရင်းလေးသာ ကိုယ်တိုင်လည်း စစ်၊ ရှိသမျှ အမျိုးတွေလည်း တိုက်တွန်းပါ။ (ဘာရမတုန်း၊ မလျှော့ဘူး၊ အမေချွိကွ) .
မွေးမေလေ – နာတို့ကတော့ အမေချွိကို ချစ်တဲ့ အမှုနဲ့ ဝန်းရံရတော့မပေါ့လေ။ အလံလေးတွေ ကိုင်ရဦးမလားး။ ခိခိ (အံမယ်။ ဟားတာလား)
ကေဇီ – ပါးတို့ နဖူးတို့မှာပါ စတစ်ကာလေးတွေ ကပ်ပေးပါညော် (ညင်းညင်းညင်း၊ ဒီလိုလာလို့ ဘယ်ရမလဲ) .
မွေးမေလေ- ခွိခွိခွိ ခစ်ခစ်ခစ်။ အရဂါးစတာ။ အတည်ပြောမို့။ မဲစာရင်းကို နိ အဒေါ်တွေ မောင်တွေ စစ်ဖို့ ပျင်းနေကြတယ်။ အဲဒါ နည်းနည်း ရစ်ပေးလိုက်အူး သပ်လား (ကြည့်ကြည့် ဒါ ကေဇီ အမေ ရန်ပွဲစား) .
ကေဇီ – ငင်? ဟွတ်လားး တွေ့ကြသေးတာပေါ့။ စတေးတပ် တင်ပြီးကို ဆဲပစ်မယ်။ .
မွေးမေလေ့ – အဲလို လုပ်ရဘူးလေ။ ခု အိမ်မှာ သူ့တို့ ကွန်မန်ဒါ ဒေါ်ငယ်ရှိတယ်။ သူ့ကို မိန်း ကီး ပေးလိုက်။ ဟိဟိ (ဤသို့ ပွဲသွင်းတတ်သော မွေးမေလေ့) .
ကေဇီ – ဖုန်းပေးလိုက် ဖုန်းပေးလိုက်…. .
ဒေါ်ငယ် – သိမီးလေးးးး၊ နောက်လ ကိုယ့် အဒေါ်မွေးနေ့ အမှတ်ရသေးရဲ့လားးးး၊ ဘာတွေ ရေးတင်နေတာတုန်းးး
ကေဇီ – မှတ်မိတာပေါ့လို့။ မွေးနေ့လက်ဆောင် လိုချင်ရင် မဲသွားစစ်။ .
ဒေါ်ငယ် – ဟဲ့။ ပလုပ်တုတ်။ စစ်ပါ့မယ်ကွယ် စစ်ပါ့မယ်။ .
ကေဇီ – စစ်ရုံနဲ့ မပြီး ဘယ်ကို မဲပေးရမယ် ဆိုတာသိတယ်နော်။ ဒေါ်ငယ်တို့ မဲမပေးရင် သာမီးပြန်မလာဘု။
(ကေဇီကို အရမ်းချစ်၍ စလုံးသို့ မလွှတ်ရန် အတိုက်အခံပြောသော အဒေါ်မို့ အညှာကိုင်ရခြင်းဖြစ်၏၊ ခွေးလွှတ်ပါ ဒေါ်ငယ်) .
ဒေါ်ငယ် – ပြန်မလာစကားတော့ မပြောပါနဲ့ သာမီးရယ်၊ စိတ်ချပါ စိတ်ချပါ။ တစ်အိမ်လုံးကို မဲစာရင်းစစ်ဖို့၊ မဲပေးဖို့…. ပြော……… ပြော လိုက် …….. ……………………. ……………………… !!!!!!
(ဟယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်?? )။
မွေးမေလေ့ – ဘာတွေပြောလိုက်တုန်းး သာမီးရယ်။ နင့် အဒေါ် ငိုသွားပြီ .
ကေဇီ – ပြန်မလာဘူးးး ပြောလိုက်တာလေ။ ဒါနဲ့ ကိုင်မှ ရမှာမို့။ .
မွေးမေလေ့ – အောင်မယ်၊ ပြန်မလာပဲ နေရဲနေကြည့်။ နာ က နိ ဆီ လိုက်နေမှာ။ ပိုတောင် ကောင်းသေးး၊ နိုင်ချံဂါးမှာ လိုက်နေမှာ (ဟိုက်၊ ရှာလပွတ်၊ သူ့ ကျ ဒီနည်းနဲ့မရပါလား)
ကေဇီ – အဟိအဟိ။ အရဂါးစတာပါ မာမီ။ ဒီလို ခြိမ်းခြောက်မှ ရမှာမို့ ခြောက်ကြည့်တာပါ။ မရတော့လည်း ပြန်လာ နောက် ၁၀ နှစ် အမတ်ဝင်ရွေးခံအူးမှာ။ အဟိ။
မွေးမေလေ့ – ဟယ်။ မာမီတို့ အသက်ကြီးမှ အေးအေးနေဗျဇီကွယ် (ကျန်းးး ချက်ချင်းကိုအသက်ကြီးချင်ယောင်ဆောင်ပစ်တာ)
ကဲကွယ် ဒီလောက်ပဲ။ ဖေ့ဘုတ်မှာ ဓာတ်ပုံလေးဘာလေး မတင်တာကြာလို့ တင်အူးးးး၊
ယောင်လို့ မတင်နဲ့ မတင်နဲ့။
ဒီကာလ က နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်ပြီး ဒေါသမောဟတွေနဲ့ အရုပ်ကြီးဆိုးပြီး ရင့်နေမှာ၊ မတင်နဲ့။ ဒါပဲ။
(ဂစ်ဂစ်ဂစ်၊ ပြောချင်ရာပြောပြီး ဖုန်းချသွားပြီ)
ဂျက်စပဲရိုး says: တို့ မာမီ က တော့ ပြတ်တယ်။
အမေ မဲစာရင်း လေး ကြည့်ပြီးပြီလား ဆို
စိတ်မဝင်စားဘူး တဲ့း)
ဇီဇီခင်ဇော် says: မာမီ့ မြေးးလေးးတွေ ကို
သူများးနိုင်ငံ မှာ ထားးမို့ လားးလို့
နာတော့ သူ့မြေးးနဲ့ပဲ ကိုင်တယ်..
နာ တို့ မောင်နှမ က ဟိုနဲ့ ဒီ ကူးးနိုင်တော့ သူ က မကြွေတော့ ဘူးးး
သူ့မြေးးလေးးး ဟိုဘက် ခမည်းးခမက် အိမ်သွားးတာတောင် လိုက်ခေါ်တတ်တဲ့ အဖွားးမို့ အာ့ နဲ့ ကိုင်ထားးတာ.. ကိုယ့် အမျိုးး အထာ ကိုယ် သိမှ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: 60%
Overall, OECD countries experience turnout rates of about 70%, while in the U.S., about 60% of the voting eligible population votes during presidential election years, and about 40% votes during midterm elections.
အမေရိကားကတော့.. မဲပေးနိုင်တဲ့အမေရိကန်အားလုံးရဲ့.. ၆၀%ပဲမဲပေးတယ်..။
မြန်မာပြည်မတော့.. တက်ကြွတဲ့.. ကြက်ဖွ.. အဲ..အဲ.. ကြက်ဖ… တွေကျေးဇူးနဲ့.. ဒီထက်ပိုမယ်ထင်တယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဂလောက် ကြက်ဖွ လုပ်မှ အတော်ပဲ
ကိုယ်တိုင်ကျ မထပဲ အပြောင်းးအလဲ ဆိုတာ ကို ငုတ်တုတ်ထိုင် လိုက်လို့ ဘယ်ရမလဲ.. အမေလိကားး က အမေလိကန်ဒေ (မှန်လားးဟင်) နဲ့ တော့ မနှိုင်းးနဲ့ လေ.. ဒါ က ရွေးး ကောက်ပွဲ ဟုတ်ဘူးးး
တော်လှန်ရေးးး တော်လှန် ရေးးး
တော်မလှန် ရင် …
မတော်လှန်ရင် ဒီ အာဏာရှင် ဖိနပ်အောက် က မလွတ်ဘူးးမှတ်…!! အဟွတ် အဟု အဟမ်းးး
Mike says: .ကျုပ်အိမ်ကတော့မဲစါရင်းစစ်ပီးပါပီ
.ခုမှသတိရတယ်…ကျုပ်မွေးမေလေ့အိမ်မနက်ဖန်သွားပြီးတွန်းလိုက်အုံးမယ်..ဟိဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရှိသမျှ အမျိုးး အဆွေေ အကုန် တိုက်တွန်းး
တောင်ပေါ်သား says: ( နောက် ၁၀ နှစ် အမတ်ဝင်ရွေးခံအူးမှာ။ အဟိ။ )
ကမာရွတ်မှာ လာအရွေးခံနော် ၊ သားသား မဲထည့်မယ်ဗျာ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကမာရွတ် မှာ အိမ်ရှိဘူးးး
တညားးက ကေသာကျော့ရှင်းးတို့ ပြိုင်တဲ့ နေရာက .. ဟိ
@QUIL@ says: ဘာပူနေသလဲကွယ်…
အချိန်တန်ရင် ၀န်ဂျီးတနေရာလောက် ယူပီး
ကျေးဇူးရှင် ..ကယ်တင်ရှင် ဘ၀ ပျော်ပျော်ဂျီး ခံယူအုံးမှာဗျာ ……
ဇီဇီခင်ဇော် says: အေးးပေါ့ ..
ရှိသမျှ သယံဇာတတွေ ချေးးဘရိန်းး ဘ တွေ ထိုင်စားး အတင်းးစားး လို့ ကုန်ပြီလေ..
ဘူ တက်တက်တောင်းး ရမှာ…
တောင်းးရမယ့်တူတူ နိုင်ငံတကာ ကြည်ဖြူသူဆိုတော့ ပိုရတာပေါ့ .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: လိုက်လဲလိုက်တဲ့ သားအမိဘဲ။ ရီလိုက်ရတာ။
.မွေးမေလေ့ ကို ရွာထဲ ခေါ်လာပါလား ဇီကလေးရယ်။
အရီး FB မှာ တော့ “အလိုလေး” တို့ “OMG” တို့ ဆိုပြီး ဘာမှ မဟုတ်တာ တွေ ကို Status တင်ရင်တောင် Like လုပ်တဲ့ အမျိုးများ၊ သူငယ်ချင်းများ က
နက်နဲသော နိုင်ငံရေးစကားများ တင်ရင် လောင်ရှက်တော်မူကြပါတယ်။ lol:-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: နိုင်ငံရေးး ဆိုတာတော့
ဒါမယ့် အမေစု ပြောသလို တကြိမ်ရဲရင့်လိုက်ရုံနဲ့ တစ်သက်လုံးး အကြောက်တရားးက လွတ်မတဲ့…!!
တကြိမ်တော့ ရဲရင့် သင့်ပါတယ်..
အရင် က လူတွေ ကြိုးးစားးခဲ့ ဘဝတွေ နစ်မြှုပ်ခဲ့တာ အတွက် လျော်ကြေးး ပေးးနိုင်တာ ဒါလေးးပဲ ရှိတာလေ …. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2399
ဇီဇီခင်ဇော် says: မဲတစ်မဲ ဟာ ပြည်သူ့ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျည်တစ်တောင့်
ဦးကြောင်ကြီး says: လူမိုက်ခင်ဇော်ကို ဒီချုပ်အာဏှရလျင် ဒီစွမ်းအားယှဉ်အဖွဲ့ အူးစောင်ခိုင်းမဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကောင်းးတယ် လို့
လောက်လေးးဂွ တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ ထားးလိုက်မယ်
Swal Taw Ywet says: တောက်စ်၊
ငိုထားတာတွေ့လို့ တရားခံရှာနေတာ ခုမှ မိတယ်။
ဒေါ်လေးကို မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်တဲ့ ဇီဇိ
ခုတောင် ဆန်တအိတ် ၂သောင်းကျော်နေမင့်ဟာာာာ။